नर्क गएको रहेछ भने नि ? - chukuprakash | Nepali Lifestyle,Nepali literature,entertainment,Software
Home » चुटकिला » नर्क गएको रहेछ भने नि ?
नर्क गएको रहेछ भने नि ?
एउटा क्लासमा ह्वेलको बारेमा कुरा हुँदैथियो । शिक्षकः ह्वेल शारिरिक रुपमा ठुलो भएपनि मानिसलाई निल्न सक्दैन, किन भने उसको घाँटी सानो हुन्छ । बिद्यार्थीः तर, दिपक त जापान जाँदा ह्वेलले निलेको रे, शिक्षकः होइन, त्यो असम्भव छ । बिद्यार्थीः त्यसोभए म स्वर्ग गएपछि दीपकलाई सोध्छु । शिक्षकः अनि नर्क गएको रहेछ भने नि ? बिद्यार्थीः सरले सोध्नु नि ।